Vidim-bary: tafakatra 2 000 Ar ny kilaon’ny makalioka | NewsMada
Vidim-bary: tafakatra 2 000 Ar ny kilaon’ny makalioka
Miakatra tsikelikely ny vidim-bary amin’izao vanim-potoana fahavaratra izao, lazaina hoe maitsoahitra. Saika ahitana izany fisondrotana izany avokoa ny faritra samihafa eto amin’ny Nosy.
Araka ny tatitry ny Foibe fanaraha-maso ny vary (ODR), farany teo, ny laharana 562, misondrotra tsikelikely ny vidim-bary eto amintsika. Tsotra ny antony, mihena ny tolotra miohatra amin’ny tinady ka tsy maintsy miakatra ny vidiny.
Anisan’ny hanamarinana izany, efa tafakatra 2 100 Ar ny kilaon’ny makalioka any Fianarantsoa I, ny herinandro farany ny volana septambra 2019 teo. Any Sambava, efa 3 000 Ar ny kilaon’ny makalioka, ary 2 700 Ar ny salambidin’ny vary avy eto an-toerana. Any Fianarantsoa koa anefa no mora indrindra ny vary gasy tsotra, 1 550 Ar ny kilao.
Anisan’ny nisondrotra koa ny vidin’ny vary akotry, miainga any amin’ny toerana ambolena ny vary. Any Alaotra, manodidina ny 950 Ar ny kilao ny herinandro farany ny volana septambra. Raha ny salanisa ankapobeny, nidina io vidiny io satria 904 Ar/kg ny herinandro faran’ny septambra 2019 raha 978 Ar/kg ny herinandro talohany. Milaza ny tatitry ny ODR fa mahatonga izany ny fanokafana ny tahirim-bary iombonan’ny kaoperativan’ny mpamboly eny ifotony (GCV). Avoakan’ny mpikambana avokoa ny tahiriny, hatakalo vola handoavana ny vola nindramina fony nambolena ny vary, sy handoavana ny vola mivoaka ny isan- tokantrano, toy ny fampidirana mpianatra, ohatra.
Sarotra ny famatsiana
Vinavinaina fa mbola hiakatra hatrany io vidim-bary io satria mihasarotra ny famatsiana raha vao mirotsaka ny orana, ho sarotra ny famoaham-bokatra, mihakely ny tahiry. Indrindra amin’ny faramparan’ny taona 2019 sy ny fiandohan’ny taona 2020, fotoana tena mety hisian’ny rivodoza. Amin’ny fiandohan’ny janoary anefa vao hiakatra ny varialoha nefa tsy hahahenika ny famatsiana eo amin’ny tsena.